Lufthansa Boeing 787-9 Voalohany Dreamliner hatao hoe Berlin
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa Boeing 787-9 Voalohany Dreamliner hatao hoe Berlin
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • People • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Lufthansa Boeing 787-9 Voalohany Dreamliner hatao hoe Berlin.
Lufthansa sy ny renivohitra Alemanina dia manana fifandraisana lava sy manokana. Ny orinasan-tserasera dia natsangana tao Berlin tamin'ny 1926 ary nitsangana indray ho lasa iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany. Taorian'ny fara tampon'ny Ady Lehibe Faharoa ary nandritra ny 45 taona dia ny fiaramanidina sivily an'ny 'mpiara-dia' ihany no navela hiditra tao amin'ilay tanàna nizara roa.
Lanonana ofisialy amin'ny anarana ofisialy sy sidina voalohany an'ny Boeing 787-9 voalohany an'ny Lufthansa amin'ny taona ho avy.
Nanambara i Lufthansa fa handray fiaramanidina Boeing 787 Dreamliners dimy amin'ny 2022.
Ny fanjifana solika sy ny famoahana CO2 an'ny fiaramanidina lava dia manodidina ny 30 isan-jato ambany noho ireo teo alohany.
Hanana masoivoho "manidina" vaovao ny renivohitra Alemanina: Lufthansa dia manonona ny Boeing 787-9 voalohany hoe "Berlin." Ny lanonana fanendrena dia kasaina hatao aorian'ny fandefasana ny fiaramanidina amin'ny taona ho avy.
"Berlin”No voalohany amin'ireo Dreamliners Boeing 787-9 dimy izay hanampy an'i Lufthansa ho an'ny fiaramanidiny amin'ny 2022. Ilay fiaramanidina lava-maoderina lava be dia be no mandany solitany 2.5 litatra isaky ny mpandeha ary 100 kilometatra entina. Izany dia manodidina ny 30 isan-jato latsaka noho ny fiaramanidina teo alohany. Ny emissions CO2 dia nihatsara ihany koa.
Hatramin'ny 1960, Lufthansa dia nanana fomban-drazana amin'ny fanomezana anarana ny fiaramanidiny amin'ny tanànan'ny Alemanina. Willy Brandt, Chancellor any Alemana Andrefana tamin'ny faran'ny taona 1960 sy 70, dia nanome voninahitra an'i Lufthansa nandritra ny naha-ben'ny tanànan'ny West West Berlin (1957-1966) azy tamin'ny anarana hoe Boeing 707 voalohany an'ny kaompaniam-pitaterana “Berlin".
Vao tsy ela akory izay, ny Airbus A380 iray misy ny mari-pamantarana D-AIMI dia nitondra ny anarana malaza an'ny renivohitr'i Alemana. Ny Lufthansa Boeing 787-9 voalohany - "Berlin" - dia hisoratra anarana D-ABPA. Ny tanjona iraisan'ny kaontinanta voalohany an'ny Lufthansa's 787-9 dia ny any Toronto, ny foibe ara-bola sy ny foibe any Kanada.
Lufthansa ary ny renivohitra alemanina dia manana fifandraisana lava sy manokana. Ny orinasa prewar dia niorina tao Berlin tamin'ny 1926 ary nitsangana indray ho lasa iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany. Taorian'ny fara tampon'ny Ady Lehibe Faharoa sy nandritra ny 45 taona dia ny fiaramanidina sivily amin'ireo 'mpiara-dia' ihany no navela hiditra tao amin'ilay tanàna nizara roa.
Hatramin'ny nampiraisana azy dia nandeha nanidina tany Berlin nandritra ny 30 taona mahery i Lufthansa, tsy misy vondrona sidina hafa manidina maro be erak'izao tontolo izao tao anatin'ny folo taona lasa satria Lufthansa sy ireo rahavavy mpitatitra azy. Amin'izao fotoana izao, ny seranam-piaramanidina Lufthansa Group dia mampifandray ny renivohitra Alemanina amin'ny toeran-tany 260 manerantany, na amin'ny sidina mivantana na amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny iray amin'ireo ivon-toeran'ireo vondrona maro.